Ohaneze: Ndigbo ga-atụnyere Atiku - BBC News Ìgbò
Ohaneze: Ndigbo ga-atụnyere Atiku
24 Jenụwarị 2019
Image copyright Ebere Ekeopara
Nkenke aha onyonyo Ndigbo kwenyere na "restructuring"
Otu ama dịka otu kachasị elu n'ọnụ na-ekwuru Igbo Na Naijiria bụ Ọhaneze Ndigbo adọnyere Atiku Abubakar,bụ onye na-azọ ọkwa onyeisiala n'aha PDP.
Nke a bụ mkpebi ha kwekọrịtara ka ha mechara nzụkọ Imeobi ha mere n'Enugwu ụbọchị Tọọzde.
O nweghị ihe gbasara anyị n'ụbọchị achumta vootu Buhari - Ohanaeze
Lee ndị ise kwadoro nhazigharị Naijiria na mpaghara
Nigeria Election 2019: Mbaka, Oyedepo na ụkọchukwu ndị ọzọ okwu ha na-adị ire
N'akwụkwọ ozi ha wepụtachara ka ha mechara ọgbakọ ahụ nke onyeisi otu ahụ bụ Nnia Nwodo binyere aka, otu ahụ gbadoro ụkwụ na ọtụtụ ihe gụnyere nkwa nhazigharị Naijiria na mpaghara na mpaghara(restructuring) nke Atiku kwere na nkwa.
Ihe ọzọ ha rụtụrụ aka bụ nhọrọAtiku họrọ nwa afọ Igbo bụ Peter Obi dịka onye ya na ya ga-azọ kọ dịka osote ya.
Ohaneze kpọrọ ụmụ Igbo oku ka ha pụta n'igwe were PVC dịka ngwa ha ga-eji nweta nhazigharị obodo ka ọ dị mma.
Ha bekukwara mbaụwa ka ha nye aka hụ na e nwere ntuliaka kwụ ọtọ.
Ndigbo tụnyere m, arụtọpụ Akwammiri Naija nke abụo- Buhari
Image copyright @BashirAhmaad
Onyeisiala Muhammadu Buhari arịọla Ndigbo ka ha tụnyere ya na ntuliaka na-abịa iji nye ya ohere ịrụtọpụ ọrụ Akwammiri Naija nke abụọ nakwa ọrụ ndị ọzọ.
Buhari kwuru nke a ụbọchị Tọọzde oge ọ gara Ọnịcha Anambara steeti maka ọsọ achumta vootu ya.
O jiri ohere ahụ were gbape ụlọ ọkpụtọrọọkpụ Zik nke a kpọọ 'Zik Mausoleum' na bekee nke o kwuru sị na "ọ bụ ọrụ kwesiri ka ọ bụrụ na a rụchara ya afọ iri abụọ gara aga."
Image copyright Buhari-Onitsha campaign-@Asorock
Mịnịsta na-ahụ maka njem bụ Rotimi Amaechi nọrọ ebe ahụ kwe Ndigbo nkwa na ewezụga ịrụ Akwammiri Naija nke abụọ na okporoụzọ ndị gọọmentị ji n'aka, na ha ga-arụ okporoụgbọ oloko ga-agafe Onitsha, Nnewi, Portharcourt na obodo ndị ọzọ dị n'ala Igbo.
Buhari mechara gaa Enugwu maka achumta vootu ya.
APC Imo achụpụ Hope Uzọdịnma?
Image copyright Hope Uzodinma/Facebook
Nkenke aha onyonyo Hope Uzodinma ji aha APC azọ ọkwa gọvanọ n'Imo Steeti na ntuliaka 2019
Otu nkewa n'ime APC Imo kwuru na ha achụpụla Sen Hope Uzodinma bụ onye na-azọ ọkwa gọvanọ n'aha APC maka ebubo ikpa agwa megidere pati ha.
Onyeisioche ha bụ Dan Nwafor gwara BBC Igbo na ha nwere mkpebi a ka ha mechara nnyocha mkpesa si Omuma Ward n'Oru-East mana onyeisioche nkewa nke ọzọ bụ Marcon Nlemigbo kwuru na akụkọ a bụghị eziokwu.
Nlemigbo sị,"O nweghị ihe dị otu a. Ọ bụghị eziokwu. Egwu ka ha na-egwu."
Inec ajụla nritu Oby Ezekwesili nke ACPN rituru na ịzọ ọkwa onyeisiala.
Inec kwuru na dịka iwu ntuliaka siri dị, onye chọrọ iritu ga-enye ụlọọrụ ha ozi abali iri anọ na ise tupu ntuliaka.
Ezekwesili awụsala ngwa ọgụ ya, patị ya na-akwadozi Buhari
N'ụtụtụ ụbọchị Tọọzde, Oby Ezekwesili bụ onye na-azọ ọkwa onyeisiala n'okpuru pati ACPN chịsara ọwa n'ịgba ọsọ ahụ sị na ya ga-adọnyere otu chọrọ ịnapu otu PDP na APC ngwa ọgụ ya.
O kwuru na ọ kwekọrịtara nke a n'onwe ya dịka emechara ndọrịtaụka n'etiti ya na ndị ọzọ.
Mikel Obi abanyela otu egwu bọọlu Middlesbrough
Nkenke aha onyonyo Mikel na- agbabuuru Tianjin Teda nke China bọọlụ
Mikel onye gbabuuru Chelsea, enweghị otu ọ na-agbara kemgbe ọ hapụrụ otu egwu Tianjin Teda n'ọnwa gara aga.
Mikel ga bụ onye Naijiria nke ise ga-agbara otu Middlebrough Yakubu Ayegbeni,bart Ogbeche,Karl Ikeme na Kenneth Omeruo.
'Restructuring' a ga-aza ekpere Ndigbo n'okwu gbasara oke?
27 Ọgọọst 2018
Ohanaeze: Anyị etinyeghi ụbọchị ọgbakọ imeobi maka Buhari
'Oge ntuliaka ka anyị kacha eri'
Onyinye ise e ji arịọ maka vootu gị